Amanqaku kaTim Krozek Martech Zone |
Amanqaku ngu UTim Krozek
UTim Krozek yi-CEO ye Khulisa iMithombo yeendaba, kwindawo yentengiso yedijithali ekhokelayo yentengiso.
Ngaphambi kokuNyusa amajelo eendaba, uKrozek wayenoxanduva lwengeniso yehlabathi kunye neenzame zokufumana abathengi. Uncede ukukhulisa iqela lomntu wokuqala le-15 labasebenzi abangama-220 kunye nangaphezulu kwe- $ 40 yezigidi kwingeniso. IFrontier esebenzayo iya kuthi kamva ifunyanwe yiAdobe (NASDAQ: ADBE). Ubaleke ukuthengisa ukuthengisa kwihlabathi liphela kunye nophuhliso lweshishini, ulawulo lwenkqubo, kunye neenkonzo zabaxhasi. Kamva ulawule iinzame zeFlite.com zokuvelisa ingeniso yohlobo lwayo, iarhente kunye neshishini lomshicileli.
NgoMvulo, Septemba 12, 2016 NgoLwesibini, Septemba 13, 2016 UTim Krozek
Iintengiso zikaGoogle ezandisiweyo (ETAs) zihlala ngokusemthethweni! Ifomathi entsha, ende eyintambo yokuqala yentengiso ikhutshwa kuzo zonke izixhobo ecaleni kwefomathi yentengiso esemgangathweni efanelekileyo yedesktop- kodwa kuphela okwangoku. Ukuqala nge-26 ka-Okthobha ka-2016, abathengisi abasayi kuphinda benze okanye balayishe intengiso yokubhaliweyo esemgangathweni. Ekugqibeleni, ezi ntengiso ziya kuphelela kwimbali yokukhangela ehlawulelweyo kwaye inyamalale kwiphepha lakho leziphumo. UGoogle unike abathengisi